Qatar oo sheegtay inaysan gorgortan ka galayn xiritaanka Aljazeera - Jazeera FM
Qatar oo sheegtay inaysan gorgortan ka galayn xiritaanka Aljazeera
June 13, 2017 admin featured
Dowlada Qatar ayaa bilowday dadaalo ay ku dooneyso in xal loogu helo xayiraada ay kusoo rogeen qaar kamid ah dalalka Khaliijka.
Wasiirka Arrimaha Dibada ee Qatar Maxamed Cabdulraxman Al Thani oo booqasho ku tagay dalka France ayaa kulamo laleh qaar kamid ah madaxda Midowga Yurub.
Mohamed Cabdulraxman Al Thani ayaa sheegay in Qatar ay diyaar u tahay inay xal u hesho khilaafka balse aysan diyaar u ahayn inay wax gorgortan ah ka gasho Siyaasadooda arrimaha dibada iyo arrimaha u gaarka ah iyaga.
“….Siyaasadeena arrimaha dibada waa mid aan u madax banaanahay, isla markaana aan ku saleyno waxaan u aragno wanaaga iyo wadada saxan, arrimaha gudaha ee Qatarna waa kuwo aan u madax banaanahay anaga, sida Telefishinka Aljazeera marnaba arrintaasi gorgortan kama galeyno…” ayuu yiri Wasiirka oo intaasi raaciyey in Qatar ay ka codsaneyso dalalka Sacuudiga iyo xulafadiisa inay cadeeyaan farogelinta ay sheegayaan in Qatar ku heyso dalalkooda.
“…Eedeynta ay sheegayaan inaan farogelinay arrimahooda u gaarka ah, hadii ay jiraan hasoo bandhigaan, anagana waxaanu soo bandhigaynaa jawaabteena….” ayuu yiri Wasiirka oo saxaafada kula hadlayey magaalada Paris.
← NIN XUKUN XABSI AH LAGU RIDAY KADIB MARKII UU CABAY SIGAAR BISHA RAMADAN
War-murtiyeed Ka Soo Baxay Guddiga Doorashadda Puntland →